ला’शको पो’स्टमार्टम गर्न पर्दैन भन्दै कोरोनाको नाम, अस्पतालका डाक्टरको यस्ता क’र्तुत, हेर्नुस लाइभ देख्ने पुण्यले गरे स’नस’नीपूर्ण खुलाशा, किन प’क्राउ गरियो ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/ला’शको पो’स्टमार्टम गर्न पर्दैन भन्दै कोरोनाको नाम, अस्पतालका डाक्टरको यस्ता क’र्तुत, हेर्नुस लाइभ देख्ने पुण्यले गरे स’नस’नीपूर्ण खुलाशा, किन प’क्राउ गरियो ?
आफन्तहरुले श’वको पोष्टमार्टम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कोरोनाको नाम दिएर उनको कसैले ज्या’न लिएको आफन्तको गु’नासो छ । आफन्तसँग छलफल भइरहेको जे’लर बाँस्कोटाले बताए। केन्द्रीय कारागारमा हालसम्म ६ जना कोरोना संक्रमितको ज्या’न गएको छ । यहाँ बाट हेर्नुहोस भिडियो